Microdosing In Combination with Yoga • Dawooyinka Inc.eu
Microdosing oo lagu daro yoga
Microdosing-ka ayaa noqday wax ka mid ah isbeddellada fayoobaanta sannadihii la soo dhaafay waxayna caan ku tahay caan. Maxay ku kala duwan yihiin microdosing marka loo eego jimicsiga ruuxiga ah sida yoga ama fikirka? Mise howlahan jirka iyo maskaxdaba wey is xoojin karaan?
In kasta oo warbixinnada sheeko xaddidan ay qasab yihiin, haddana su'aalaha muhiimka ahi waxay ku saabsan yihiin sida microdosing u shaqeeyo iyo inta faa'iidooyinka la soo sheegay ay ugu wacan tahay saamaynta daawooyinka, halkii laga rumaysan lahaa iyo rajooyinka ka qaybgalayaasha.
1 Cilmi-baarista Australiya: Saamaynta Microdosing
2 Microdosing iyo yoga
3 Caafimaadka nafsiga ah
4 Microdosing waxay leedahay khataro
5 Sidee sii dheer?
Cilmi-baarista Australiya: Saamaynta Microdosing
Cilmi baaristu waxay noo sheegaysaa in qaar ka mid ah faa'iidooyinka microdosing la barbar dhigi karo howlaha kale ee fayoqabka sida yoga. Ma cadda inta Australiyaan ah microdosingSi kastaba ha noqotee, boqolkiiba dadka waaweyn ee Australiyaanka ah ee isticmaalay cilmu-nafsiga inta ay nool yihiin ayaa ka kordhay 8% 2001 ilaa 10,9% ee 2019.
Kadib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah, cilmibaarista Australiya ee ku saabsan cilmu-nafsiga ayaa hadda si dhakhso leh u socota. Mid ka mid ah aagagga xiisaha gaarka ah leh ayaa ah cilmiga maaddada 'microdosing'. Daraasad hore oo uu sameeyay mid ka mid ah Vince Polito, heerarka niyadjabka iyo culeyska fekerka ayaa hoos u dhacay ka dib muddo lix toddobaad ah oo ku saabsan microdosing. Intaa waxaa sii dheer, kaqeybgalayaashu waxay soo sheegeen wax yar oo maskaxda ka wareegaya, iyagoo soo jeedinaya in microdosing-ka uu horseed u noqdo waxqabadka garashada garaadka. Si kastaba ha noqotee, daraasaddan ayaa sidoo kale lagu ogaaday kororka neerfaha. Dadka dhibcaha sare ka qaata cabirkan shakhsiyan waxay u badan tahay inay la kulmaan shucuur aan fiicnayn waxayna guud ahaan u nugul yihiin niyad jab iyo walaac. Tani waxay ahayd mid layaableh oo umuuqatay inaysan kuhaboonayn natiijooyinka intiisa kale.
Microdosing iyo yoga
Daraasad dhowaan la sameeyay, koox cilmi baaris ah ayaa qortay kaqeybgalayaasha 339 ee ku hawlan microdosing, yoga, labadaba, ama midkoodna. Xirfadleyaasha Yoga waxay soo sheegeen heerar sare oo walaac iyo walaac ka badan kuwa ku jira mikrodosing ama kooxaha xakamaynta (kaqeybgalayaasha aan sameynin yoga ama microdosing). Dhanka kale, dadka jimicsiga jimicsiga sameeya waxay soo sheegeen heerar sare oo niyad jab ah.
Ma dhihi karno hubaal sababta aan u aragnay natiijooyinkan, in kasta oo ay macquul tahay in dadka ay la soo dersaan culeys iyo walwal ay u soo jiiteen yoga, halka kuwa niyadjabsan ay u badan tahay inay microdose. Tani waxay ahayd daraasad qaybaha kala duwan ah, sidaa darteed kaqeybgalayaasha waxaa lagu arkay waxqabadkooda ay doorteen, halkii loo qoondeyn lahaa koox gaar ah.
Laakiin ka sii muhiimsan, kooxda yoga iyo kooxda microdosing-ka waxay gaareen isbarbardhig sare oo guud ahaan dhibcaha fayoobaanta nafsaaniga ah marka la barbar dhigo kooxda xakamaynta. Iyo si xiiso leh, dadka ku hawlan yoga iyo microdosing labadaba waxay soo sheegeen heerarka hoose ee niyadjabka, walwalka, iyo walbahaarka. Tani waxay soo jeedinaysaa in microdosing iyo yoga ay yeelan karaan saameyn isku dhafan.
Caafimaadka nafsiga ah
Natiijooyinka ugu dambeeyay waxay soo jeedinayaan in saameynta wanaagsan ee microdosing ee fayoobaanta nafsaaniga ah ay sabab u tahay yareynta neerfaha. Waxqabadka waxqabadka wuxuu ka imaan karaa kororka damiirka ee dadku la kulmaan iyadoo ay ugu wacan tahay qaadashada qadar yar oo cilmu-nafsiyeed. Cilmi baaristu waxay muujineysaa in howlaha sida yoga ay si gaar ah waxtar ugu leeyihiin microdosers-ka khibrada yar. Gaar ahaan marka lala tacaalayo dhibaatooyinka soo raaca ee taban sida walaaca. Sababtoo ah daawooyinka dhimirka waa sharci darro, waa anshax xumo in la siiyo ka-qaybgalayaasha cilmi-baarista.
Microdosing waxay leedahay khataro
Maaddaama suuqa daroogada sharci darrada ah aan sharciyeysneyn, waxaa jira khatar ah in dadku ay si kama 'ah u cunaan walxo cusub oo nafsaani ah, sida 25-I-NBOMe, oo loo iibiyo LSD.
Dadku sidoo kale ma hubi karaan baaxadda qiyaasta ay qaadanayso. Tani waxay u horseedi kartaa saameyn aan loo baahnayn. Taasi waa sababta dadka lagula taliyay inay ku bilaabaan qadar aad u hooseeya.
Sidee sii dheer?
In kasta oo buunbuunin ku saabsan microdosing, natiijooyinka sayniska ilaa iyo hadda waa la isku qasan. Waxaan ogaanay in microdosersku ay soo sheegaan faa'iidooyin wax ku ool ah. Laakiin ma cadda inta ay tani sababi karto saameynta placebo iyo filashooyinka.
Dadka doorta inay microdose, ku dhaqma dhaqamada fekerka sida yoga sidoo kale waxay yareyn kartaa qaar ka mid ah saameynta aan loo baahnayn waxayna u horseedi kartaa natiijooyin wanaagsan guud ahaan. Dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa inay ogaadaan inay ka helaan isla faa iidooyinka jimicsiga maskaxda sida fekerka ama yoga oo keliya, taas oo ka khatar yar microdosing.
Read more theconversation.com (Source, EN)
Shirkadda Canadian waxay la shaqeysaa isla boqoshaada lagu sawiray Nintendo Super Mario
Shirkadda fadhigeedu yahay Kanada ee Psyched Wellness Ltd. taas oo diiradda saareysa kaabayaasha caafimaadka waa mid ka mid ah ...
Psychedelics oo ah isbeddel caafimaad cusub?
Qaadashada qaddar yar oo daroogada maskaxda ah, aka microdosing. Isbedelkan ka soo ifbaxay Silicon Valley waa…